Finger Pulse Oximeter kubva kuKarman Healthcare
Nyowani uye yakashongedzwa pateni
Nzira ina-OLED kuratidzwa kwe 0.95 inches
Unhu hwakanaka hwekurwa nemutsimba, uchiri kushanda mushe kunyangwe uchinge wadonha kubva panzvimbo yepamusoro ye1.2m
Mutete uye mutete muviri une 24mm gobvu uye 36 g huremu
Yakavakirwa-muBluetooth ye4.0 yakaderera-simba module, yakareba nguva yekushandisa.
Ratidza Mamiriro: 0.96, Dual-ruvara OLED kuratidza (bhuruu uye yero)
Ratidza Mamiriro: SP02 Kukosha, Pulse Rate Value, Pulse Rate Waveform, Bar Girafu, Battery Voltage Ratidza.
Mhando dzakasiyana dzekuratidzira. Kune mana ekuratidzira modes, uye iyo yekuratidzira modhiyo inogona kuchinjwa nekudzvanya kiyi;
Pulse yekufananidza basa. Iyo pulse waveform, yekumaka mamaki, uye bar graph inowirirana neye pulse beep.
Voltage chiratidzo: voltage chiratidzo chinogara chichionekwa.
Otomatiki kudzima basa: kana chishandiso chiri pasi penzvimbo yekuyera chinongedzo. Inozodzima yega mukati memasekondi makumi matanhatu kana chigunwe chikadonha kubva muchirongwa.
Kururamisa: 70% ~ 100%: ± 2%, Pazasi pe70% isina kutaurwa.
PR Kuyera Range: 18bpm ~ 250bpm, (resolution iri 1bpm) Kururama: 25bpm ~ 250bpm: ± 3bpm, Mamwe mabara asina kutaurwa
Kuyera Performance mune isina kusimba yekuzadza Mamiriro: SpO2 uye pulse rate inogona kuratidzwa nemazvo kana kupomba-kuzadza ratio iri 0.4%. SpO2 kukanganisa kuri ± 3%, kupomba kwekukanganisa kukanganisa kuri ± 2 bpm kana ± 2% (sarudza yakakura).
Simba Rekushandisa: isingasviki 20mA Voltage: DC 3.5V ~ 4.2V
Alarm basa. Kana iyo yekuyera mhedzisiro yabuda kunze kwekutanga-kugadzirisa chikumbaridzo, mhedzisiro yekuyera ichapenya.
zvinosanganisira Takura homwe uye Anti Tippers
Pulse Beep basa. Iyo yekupomba beep inowirirana pamwe nekutenderera uye inogona kudzima otomatiki.
zera 72 (L) x32 (W) x27 (H) (mm)
Kunonyanyisa Kurema 50 (g) (Kusanganisira bhatiri)
chiyamuro 100-240V~, 50/60Hz, 0.18A
Nguva Yekumhanyisa Bhatiri 16h (Bhatiri idzva rakazara-yakazara, Ambient tembiricha: 25C
Kutengesa Voltage 5V, 160mA
Kubhadara Nguva 2h
simba 70 mW
Kuyera Range 0% ~ 100%
kunyatsoita 70% ~ 100%, 2%
Kuyera Range 18bpm ~ 250bpm
MAKARALI USB 4.0 Standard
Chengetedza Chiyeuchidzo Standard
Simba Saver Module Standard
Chiratidzo Chemurwere Standard